सप्रिमा भइन् मिस सी क्वीन - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
विजय नेपाल / एचकेनेपाल डट कम –
पोखरा, पोखरा तेर्सापट्टीकी सुप्रिमा तुलाधरले मिस सि क्वीन–४ को ताज पहिरेकी छन् । उनले प्रतिष्पर्धामा रहेका १० जनालाई पछि पार्दै सो उपाधिसहित मिस फोटोजेनिक घोषित भइन्।
द लुक्स फेसन होम्स्ले एसइई परीक्षा दिएर बसेका किशोरीको प्रतिभा प्रष्फुटन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको सो इभेन्टको ग्राण्ड फिनालेमा सेन्ट मेरिजबाट परीक्षा दिएकी तुलाधरले सो उपाधि चुमेकी हुन् ।
द लुक्स फेसन होम्स्ले रानीपौवास्थित रञ्जित इभेन्ट सेन्टरमा भएको प्रतियोगितामा फस्ट रनरअप प्रगति बोर्डिङबाट परीक्षा दिएकी लामाचौरकी एलिना श्रेष्ठ र लिटिल स्टेपबाट परीक्षा दिएकी दीया गुरुङ सेकेण्ड रनरअप घोषित भइन् । एलिनालाई हेल्दी हेयर र दीयालाई पर्सनालिटी उपाधि पनि दिइयो ।
११ जना प्रतिष्पर्धीमध्ये भ्यूवर च्वाइससहित वेष्ट डिस्सीप्लिनको उपाधि प्रियंका कार्कीले चुमिन् । यस्तै, सोनी पौडेल पंचुअल, रोजिना केसी मिस ट्यालेन्ट, नीभिना तामाङ चार्मिङ, पूजा बास्तोला सी फेसबुक, समीक्षा पौडेल फर्ममेन्स र अनिशा श्रेष्ठ फ्याण्डी भए ।
उनीहरुलाई प्रमुख अतिथि न्यू ग्लालेक्सी स्कुलका प्राचार्य डा. रामजी शर्मा, संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रवीन्द्र बज्राचार्य, मिस सी क्वीन–३ खुशी खाँण, मिस सी क्वीन–२ मोनिका गुरुङ, मिस सी क्वीन–२ की भ्यूवर च्याइस नीशा गुरुङ, पत्रकार विजय नेपाल लगायतले ताज पहि¥याउनुका साथै पुरस्कार प्रदान गरे ।
निर्णायकमा नायक अमर सुवेदी, सैनिक आवासीय स्कुलका अंग्रेजी विभागका इञ्चार्ज लोकनाथ पौडेल, मन्टेसरी एशोसिएसन अध्यक्ष अरुना शेरचन र ग्यालेक्सी स्कुलका सहायक प्राचार्य राजेश भण्डारी थिए । प्रतिष्पर्धीलाई विभिन्न राउण्डमा उतारिएकोमा अन्तिम ५ जनालाई नायक अमर सुवेदीले ‘फरक क्षमता भएका महिलालाई समाजको मूलधारमा ल्याई सशक्तिकरणका लागि के गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । आकर्षक गाउनमा स्टेज उतारिएका उनीहरुले लिखित जवाफ दिएका हुन् । अन्तिम ५ भित्र रोजिना केसी र निभिना तामाङ पनि थिए ।
उपाधि विजेताले न्यू ग्यालेक्सीमा कक्षा ११ र १२ मा पूर्ण छात्रवृत्ति तथा फस्ट र सेकेण्ड रनरअपले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अध्ययनको मौका पाएका छन् । यस्तै बाँकी प्रतिष्पर्धीलाई २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइने प्राचार्य डा. रामजी शर्माले घोषणा गरे । उनले अरुसँग भन्दा पनि आफैसँग प्रतिष्पर्धा गरेमा सफलता अवश्य मिल्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुप्रिया गुरुङ, भूमेश्वरी पुन, नीशा गुरुङले नृत्य प्रस्तुत गरे भने प्रतिष्पर्धीहरु आमासहित क्याटवाकमा देखिँदा कार्यक्रम रोमाञ्चक बनेको थियो । विजेताले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परसमेत पाएका थिए ।
सो अवसरमा पत्रकार विजय नेपाललाई ‘लुक्स पत्रकारिता सम्मान’ प्रदान गरिएको थियो भने सहयोगीलाई मायाको चिनो दिइयो । संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रवीन्द्र बज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन ज्ञानुबाबा बोर्डिङका सहायक प्रिन्सिपल बाबुराम सुवेदीले गरेका थिए । इभेन्ट कोरियाग्राफी सुरक्षा गुरुङले गरेकी हुन्।
Trending Now : बम्जन पक्राउ नगरेकोमा संसदमा आक्रोश